UKEVIN GATES: ULUVO LWELUCA BRASI 3 - IINDABA
ULuca Brasi 3
Ekugqibeleni ukuphuma kwakhe entolongweni, imvumi yaseLouisana ibuya neevesi zayo ezinobunzima kunye necroon ethandekayo-kunye namabali amaninzi amatsha okwabelana ngawo.
Njengoko ULuca Brasi 3 iqala, uKevin Gates unokutya ngakumbi kunesiqhelo. I-mixtape entsha yiprojekthi yokuqala enkulu yomlobi wase-Louisiana okoko wakhululwa kwasekuqaleni kulo nyaka kwisigxina esisekude kunoko bekulindelekile. Wayegqibile ukukhonza iintsuku eziyi-180 ukukhaba ifeni ebusweni ukusuka eqongeni xa abasemagunyeni bafumanisa isigunyaziso sezixhobo ezingekahlawulwa ngokuchasene naye, bambiza ezinye iinyanga ezisithoba.
Ngokwenyani nedumela lakhe lokungafihlisi, uGates ungena kanye kuyo ngeNgxoxo, ebhala ukungena nokungena kuthethathethwano ne-D.A., ukujonga okuhloniphekileyo kwamanye amabanjwa, kunye nexesha lakhe elide kwigumbi lobunzima. Kodwa eyona nto ahleli kuyo kakhulu kukukhathazeka emacaleni. Unama-niggas abandithandayo, bafikelela ngaphandle, udlwengula. Unabantwana abaza kunyuka, kufuneka bafundise / Ndinosapho oluthile olugezayo ngenxa yokuba bezama ukungena. Ke kukho umrhumo emtshatweni wakhe, awuthimba ngeemvakalelo Ukufumana kwakhona: Lo ngumthwalo ekungekho namnye kuthi awufunayo / Ijaji yasophula xa ndibuyela kwinkundla / Ndagwetywa ixesha, kwaye yasikrazula. Ukubaliswa kwamabali kaGates akukaze kube kumgca opheleleyo, njengoko ebhala kwimiboniso, hayi imifanekiso. Kodwa iimvuthuluka azivumelayo apha zakha isakhelo sokwamkelwa ukuba ezi zimbini ziphantse azenzanga.
Ngaphambi kokuvalelwa kwakhe, umsebenzi kaGates wawudlala ngathi liphupha. Ulandele ukubaleka kweemixapes ezibalaseleyo nge2016's Uphuculo , ukuqala kwakhe kweAtlantic kunye neenzame ezinqabileyo ezinkulu zelebheli ezenze iinombolo ze-blockbuster ngaphandle kokwenza imvumelwano ebonakalayo yorhwebo. Ngokuzolileyo yaba yenye yeerekhodi ezithengiswa kakhulu kuloo nyaka, emva kukaDrake kuphela. Iiprojekthi ezilandelayo zeGates zomelele, nazo. Nokuba ukukhululwa kwintolongo yokumisa unyaka ophelileyo, Ngayo nayiphi na indlela 2 , ndiziva ndinamandla ngenxa yeemeko.
Amasango akavumeli ukuba ixesha lakhe lokuhamba limgxothe kwinqanaba lakhe. ULuca Brasi 3 Imixholo yemixholo yesifundo inzima, kodwa uGates ubukho obunomdla kangangokuba wenza indawo yokuthanda. Kwi-Kung Fu, uyaziqhayisa ngokuba ungumzekelo obalaseleyo, isini-haver / Isimo seMet Gala. Ngexesha lika-Shakin Emuva, ngandlela thile uguqula uvavanyo lomchamo lube yi-flex: Ndicaphuka ndicocekile kwi-PO / Ndiyintsomi ephilayo. I-warble yakhe yentliziyo ihlala iyinto emangalisayo, nayo. Ukhala njengomfana ebhasini ecula ngaphezulu kweefowuni, esazi ngokupheleleyo ukuba wonke umntu uyamva. Amasango afana nomphanda oneepaki ezimbini kuphela, iivesi zakhe ezinzima kwaye loo ngoma ichukumisayo. Kodwa uzixuba ngokukuko kangangokuba unokuthwala iprojekthi yeyure eyedwa.
kunye nokucokiswa kwabo kokwehla
Ukuba ULuca Brasi 3 uziva ungafuneki kangako kunangaphambili, nangona kunjalo, ubukhulu becala kukuba amagwegwe awafanelanga ukuba yi-titanic. Bambalwa abalibazisi entlokweni njengeyona nto ibalaseleyo; ezinye ezinamatheleyo zenza njalo kuzo zonke izizathu ezingalunganga. Ngaphandle kwesihloko sayo esibi, Nam (ngokunqumlayo ayisiyiyo ingxelo ye- # MeToo) uwela umgca wokwenza ubuqili. Ingoma iphelisa ukuzithemba kwayo kwikwayara yayo yokuqala: Ndiyakuthanda ukukubetha esidlangalaleni, athi 'Nam ngokunjalo' / Akathandi ukusebenzisa irabha, ndithi 'Nam.' Kwaye iMATA-imfutshane, njengoko woyikayo, Yenza i-America Trap kwakhona-kufanele ukuba ibe yi-mantra ye-lazier ekude, i-lamer rapper kune-Gates.
Ulunge ngakumbi xa epeyinta ngee-shades ezingwevu. Kwi-Shoulda, unikezela ngokujikeleza okuthe kratya kwindlela ophulukene nayo-ithuba lakho lokuthatha intombi eyayisakuba yintombazana, epapashwe yiPost Malone's Better Now kunye neJuice WRLD's Lucid Dreams. Ezo hits zinokuma okuncinci, ukuma kolutsha, apho i-ex ihlala ilikhoboka. Ukujikeleza kweGates ngalo mbandela kusisindisa kwingqumbo nakwinzondo. Unqwenela u-ex wakhe ulonwabo kwaye ade avume ukuba neenkani kwakhe kubanqabile ithuba lesibini. Njengesiqhelo, qhubeka ULuca Brasi 3 , Amasango asebenza njengendawo yokulungisa imeko ye-rap ethanda imilinganiselo. Kwilizwe lakhe, yonke into ihlala icacile kancinci.
sohlala sikuthanda ngeevalval
uxolo lwezigidi zeedola
ubuso obungenanto umfana wesikolo q
eminem iingoma zakutshanje